Betroka : Rongony 300 kg indray saron’ny zandary
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → août → 21 → Betroka : Rongony 300 kg indray saron’ny zandary
Redaction Midi Madagasikara 21 août 2019 2 Commentaires
Mitohy hatrany ny ady ataon’ireo mpitandro filaminana amin’ny resaka fanondranana zava-mahadomelina any amin’iny distrikan’i Betroka iny. Rongony milanja eo amin’ny 300 kilao eo indray mantsy no saron’ny zandary tao amin’ny Fangorolava, fokontany Ambalamary, kaominina Jangany, distrika Betroka ny voalohan’ny herinandro teo.
Izany dia noho ny ezaka ataon’ny eo anivon’ny zandarimarim-pirenena amin’ny fisafoana andro aman’alina ataon’izy ireo any amin’iny faritra mena izay ikoizana amin’ny asan-dahalo sy amin’ity resaka zava-mahadomelina ity. Araka ny fampitam-baovao azo hatrany mantsy dia tsy manaraka lalam-pirenena intsony ireo olon-dratsy mpanondrana izany rongony izany amin’izao noho ireo savahao ataon’ireo mpitandro filaminana eny an-dalana. Aleon’izy ireo mihodidina amin’ireny tanana kely saro-dalana ireny, saingy mbola izao nahazoana vokatra izao ihany moa. Marihana fa tsy nampoizin’ireto olon-dratsy, izay mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika sy zava-maranitra isan-karazany ny fisian’ireo zandary mpanao fisafoana tany an-kebakeban-tany tany. Vao nahatazana ireto farany izy ireo dia rafitra nitsoka namela ireto entana, izay miteti-bidy an-tapitrisany any ho any teo. Gony feno rongony miisa enina teo izy ireo no sarona ary io milanja 300 kilao io, izay saika halefa ao Andiolava, alohan’ny hanaparitahana azy any amin’ny toerana farany hitodihan’izany. « Tsy maintsy atao ny fanenjehana ny fanondranana ny zava-mahadomelina, hampisy ny fandriampahalemana aty Betroka », hoy ny tompon’andraikitry ny zandary any an-toerana. Marihana fa tany amin’iny tapany Atsimon’ny nosy ihany no nahitan’ireo mpitandro filaminana ilay tany fambolena rongony amina hektara maro.
Baleda charles 22 août 2019 at 16 h 44 min · Edit
Jules Andriamahazo tsaroako eto tamin’ny andron’ny SOUCADEAUX dia adjudent chef ary adjudent Ramarolahy avy any Andramasina
Baleda charles 22 août 2019 at 16 h 38 min · Edit
Ny ASA TOKONY hatao tompoko dia tsy EZAKA izany FA ADIDY SY ANDRAIKITRA nekena amin’ny MAHAMPIKARAMA ireo MPIASAMBAHOAKA.NY grady ,sy tambin-karama dia ILAINA fanatanterahana ny ASA fa tsy natao haderadera VAHOAKA fotsiny.
Aoka HAMETRAKA FIALANA izay mahatsapa fa mzfy ny ASA
Tamin’ny COLONISATION no nisy asaterivozina ny fanaovana MIARAMILA 3taona sy SMOTIG,ny Malagasy dia titre AUXILLIAIRES no azony tao amin’ny ZANDARY na Assstant tao amin’ny fampianarana ambonimbony,tao amin’ny GARDES INDIGENES izay navadika hoe GARDES DE MADAGASCAR( na TAINKITANA hoy ny sahisahy,) dia tsy NIHOATRAN’NY GRADE de ADJUDENT ny ambony indrindra.Toy izany koa ireo MALAGASY niasa tao amin’ny TAFIKA FRANTSAY tsy nanana CITOYENNETÉ Française( RAMAROLAHY ,RAVELOSON,RAVELOMANANTSOA,MANERA,ary ireo vitsivitsy tafaverina avy any INDOCHINE sy Algerie tao anaty ny INFANTERIE DE MARINE izay nantsoin’ny vazaha hoe LA COLONIALE.
Ireo izay nifindra taty afara tamin’ny TAFIKA MALAGASY dia betsaka no lasa Officers ambony LAHARANA.na dia niainga SAC AU DOS aza
Tadidiko tao amin’ny MUSÉE MILITAIRE tao Moramanga nisy zao soratra izao*** » »Un miltaire MALGACHE DE TOUT GRADE DOIT SALUER UN SOLDAT FRANÇAIS***Asa na mbola ao io